Xaraashka Baska Cusub ee Trabzon | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonQandaraaska Saldhigga cusub ee Baska ee Trabzon
11 / 05 / 2020 61 Trabzon, SAWIRADA, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
u jilicsan gaariga cusub ee trabzon
Qandaraaska xarunta cusub ee basaska, oo ka mid ah mashruucyada Duqa Magaalada Trabzon Metropolitan Duusaale Murat Zorluoğlu uu muhiimadda siinayo, ayaa la qorsheeyay in la bilaabo illaa dhammaadka May. Terminalka cusub, oo buuxin doona yaraanta magaalada, ayaa la rajaynayaa in uu ku adeego meeshiisa cusub dhammaadka 2021.
Saldhigga basaska, oo la doonayay in lagu baabi'iyo dadka reer Trabzon sannado badan isla markaana noqday dhaawac dhiig-baxa, ayaa ugu dambeyntii yeelan doona aragti ku habboon magaalada. Hadaladan soo socda ee ku saabsan faahfaahinta mashruuca waxaa adeegsaday Maareeyaha Dawladda Hoose ee Magaalooyinka Sayniska: Mashruuca baska cusub ee baska waxaa loogu talagalay inuu dadka siiyo dadka Trabzon iyo Terminalka halka ay u isticmaali doonaan Termabal ahaan goob joog ahaan, madaama baska jira ee hadda jira uusan buuxin karin baahida sii kordheysa ee waqtiga.
XAALADAHA GUUD EE URBAN
Waxaa looga golleeyahay in lagu xasiliyo taraafikada magaalada iyada oo la raacayo mashruuca marinka cusub oo ku yaal 30.144,85 m² plot ee ku yaal Anadolu Boulevard, degmada Ortahisar, Sanayi Mahallesi. Iyada oo la raacayo qorshayaasha cusub ee isgoysyada caqliga leh ee wadooyinka waaweyn, waxaa la saadaalinayaa in ay yareynayaan cufnaanta taraafikada ee magaalada iyo in ay ku bixiso adeegga dariiqa gaadiidka aan kala go 'lahayn ee bari - galbeed, waqooyi - koonfur. Dhismaha oo leh guud ahaan dhul dhisme ah 9.259,07 m² wuxuu leeyahay aag bas oo loogu talagalay 28 gaari iyo goob rakaab oo 1.863,23 m² ah. Muhiimadda xiriirka dhismaha uu la leeyahay magaalada waxaa la siiyay ahmiyad, waxaa la saadaaliyay in lagu dayactirayo Değirmendere oo ku taal galbeedka, iyo aagagga ku hareereysan, oo aan wax shaqo ah laheyn, ayaa lagu daray naqshadda muuqaalka muuqaalka leh Masjidka H. Nazif Kurşunoğlu ee waqooyiga.
QIIMEYNTA NOLOSHADA VEHICLE EE LACAGTA
Qeybta ayaa lagu baaray laba meelood oo deegaanka ah, dhinacyada waqooyiga iyo bariga ee kuxiran magaalada waxaa loo qoondeeyay adeegsadayaasha soo gala, halka dhanka koonfureed iyo galbeedka wajigaba soo qulqulaya ay u dhaafeen baska iyo wareejinta adeega. Gaadiidka Dadweynaha waxaa la siiyaa aagga leh basaska magaalada iyo joogsiyada minibus ee ku yaal Anadolu Boulevard. Goobaha basaska ee dhexyaala iyo 16-gaari oo laga soo galo Goobta Adeegga Deegaanka Gümüşhane waxaa laga bixiyay Ayakkabçiler Sitesi Street, oo ku yaal koonfurta dhismaha. Taas waxaa dheer, in looga golleeyahay in lagu yareeyo culeyska gaariga saaran wadada giraanta iyadoo lagu xirayo tagaasida taagan xadka rakaabka ee isku xiraya inta udhaxeysa Ayakkabçiler Sitesi Street iyo Anadolu Boulevard oo leh gaari gaar loo leeyahay oo gaaraya 104 gawaarida iyo adeegga baarkinka gawaarida ee 20 gawaarida.
UJEEDDADA IN AAD jawaab u hesho baahiyada
Qaab dhisme leh oo ballaadhan ayaa loogu talagalay in lagu beddelo hawada isku dhafan, daallan iyo calool-xumida ee ay ku hareen maareyaasha basku maanka ku hayaan, waxaana loogu talagalay in lagu abuuro muuqaal maskaxda mareegayaasha adeegsadayaasha ee u yimid magaalada oo leh daboolka saqafka leh ee sumcadda leh ee dhulka uga soo dhacay laba qodob. Intaa waxaa sii dheer, iyadoo la isticmaalayo foomka saqafka bandhigyo kala duwan oo saadaalin ah, dhismaha waxaa la siiyay meel lagu xusuusto magaalada. Dhismaha, oo leh dhul dabaq ah oo qiyaastii 5.000 oo mitir murabac ah, waxaa ku jira cutubyo gaadiid iyo adeegyo, iyo sidoo kale qiyaastii 1.200 mitir oo laba jibaaran oo ah goobo ganacsi oo la isticmaali karo iyo 800 oo mitir oo laba jibbaaran oo xafiisyo ah. Si ay isticmaaleyaashu si raaxo leh ugu safraan, dariiq xaddidan oo cad oo rakaab ah ayaa lagu go'aamiyaa ilaa meelaha basaska laga raaco ee muuqaalka ah. Waxaa lagu quudin jiray qaybo ganacsi sida kafateeriyada, hilibka buuriga ah, meelaha wax lagu qurxiyo iyo meelaha lagu madadaashoodo ee ku xeeran geeskaan. Markaa, waxaa looga golleeyahay in laga jawaabo dhammaan noocyada baahiyaha ee adeegsadayaasha isticmaala waqtiyada gaagaaban, kan gaagaaban iyo kan dheerba.
WAA IN AAD UGU SAMEEYSAAN DHAQANKA TRABZON
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in mashruucii xaruntii baska cusub ee lagu dhisi lahaa Trabzon, Duqa Magaalada Munborg Murat Zorluoğlu wuxuu yidhi, “Terminalka Baska ee Intercity wuxuu ahaa mushkilad muhiim ah oo noqotay dhaawaca dhiig-baxa ee magaalada sannadihii dhawaa. In kasta oo aadan awoodin inaad buuxiso baahiyaha basaska hadda jira, kuma haboona Trabzon sawir ahaan. Cusboonaysiinta saldhigga basaska, oo la dhisay 40 sano ka hor, ayaa ka mid ahayd ballamihii aannu ku doorannay. Isla markii aan xafiiska la wareegnay, waxaan sameynay meel ku meeleyn. Waxaan ka qaadi doonnaa boosteejada basaska meesha ay hadda ku sugan yihiin meesha Galerciler Site iyo Howlahayaga Sayniska. Markan, waxaan dhammeynay hawsheena mashruuca, oo ah tillaabada ugu horreysa ee aan ku samayn karno magaalo-u habboon magaalada. Waxaan rabnaa inaan dhisno saldhig bas oo casri ah kaasoo buuxin doona baahiyaha oo dhici doona Trabzon. Waxaan higsaneynaa inaan u dhaqaaqno saldhigayaga cusub ee baska dhammaadka 2021 ”.
Gaadiidka Cusub Waxay Ku Qulqulayaan Gaadiidka Eskisehir
Tender si Istanbul loogu talagalay 6 New Metro Line
5 Khadadka Cusub ee Cusub ee Isticmaala Isticmaala Istanbul bishii May
Xildhibaan Trabzon Canalioğlu ayaa waydiistay xarun tareen ee Trabzon Diyarbakir
Gudoomiyaha Trabzon wuxuu ku adagyahay fikirkiisa xarunta saadka ee Trabzon…
Trabzon kama saareyso caddaalad darradaas Mashruuca Xarunta Dhexe ee Trabzon
Trabzon Proposal oo loogu talagalay Tareenka Erzincan-Trabzon
Trabzon Ku-xigeenka Kaya, ayaa wax laga weydiiyay mashaariicda Trabzon!
Door cusub oo loo yaqaan 'ANTRAY Stop' in laga furo Saldhigga Baska
Saldhigga cusub ee basaska degmada aad ayuu ugu fiican yahay Çameli
Xerada Baska ee Harran Isu Diyaarinta Furitaanka
Joojinta Tram ayaa nadiif ah Eskişehir
Macluumaadka Xiriirka Saldhigga Tareenka ee Adana
Saxeexyada ayaa loo dalbaday Xarunta Saadka ee Kütahya
Raadinta Tareenka Baasaboorka ee Magaalada Bursa
Khadka Baasaboorka Magaalada Boosaaso Iskuday Isniinta
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Malatya wuxuu soo bandhigayaa sanadkan
Mashruuca Baabuurta Cable Bosphorus Cable